ပို့စ်တင်ချိန် - 6/08/2014 05:31:00 PM
(၁) ဆရာခင်ဗျာ ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးက လက်ထဲမှာ တားဆေးချောင်းထည့်ပြီးကတည်းက ရာသီလာတာ မရပ်တော့ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းမသိဘူးဖြစ်နေလို့ပါ။ ကျတော်တို့ကလည်း အခုသူများနိုင်ငံမှာဆိုတော့ စကားကလည်း သိပ်မပြောတတ်နဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်နေလို့ပါ။ ကူညီပါအုံးဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(၂) ကျွန်မ အသက် ၃၁ နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်ကျတာ တစ်နှစ်ရှိပါပြီ။ Implant ခေါ် လက်မောင်းအရေပြားအောက်တွင် ထည့်မည့် ကိုယ်ဝန်တားဆေးချောင်း ထည့်ချင်လို့ပါ။ သူ၏ ဆိုးကျိုး ကောင်းကျိုးများကိုသိချင်ပါသည်။ ထိုတားဆေးသည် ၅ နှစ်ခံလို့ ပြောပါသည်။ သောက်ဆေးများကဲ့သို့ ဆိုးကျိုးမရှိဘူးလို့ ပြောပါသည်။ ဟုတ်ပါသလား။ ကိုယ်မလိုချင်လို့ ပြန်ထုတ်လျှင် ချက်ချင်း ကလေးပြန်ရသည် လို့လည်း ပြောပါသည်။ ဟုတ်ပါသလား ဆရာ။
(၃) ဒေါက်တာရှင့် ကလေးက ၁၆ လရှိပါပြီ။ သားဦးပါ။ ကလေးမွေးပြီး ၂ လမှာ လက်မောင်းထဲကိုထည့်တဲ့ သားဆက်ခြား အချောင်းလေး ထည့်ထားပါတယ်။ ထည့်ပြီး ၁ နှစ်ကျော်လောက် ရာသီသွေးလုံးဝ မပေါ်ပါဘူးဆရာ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တလကျော်က တခါလာလိုက်ပါတယ်။ သိပ်မများပါဘူး။ အခုလကတော့ ၆ ရက်နေ့ကစပြီး နည်းနည်းလာပါတယ်။ ကိုယ်တွေ လက်တွေ အရမ်းလည်း ကိုက်ပါတယ်။ ၈ ရက်နေ့ကနေ ၁၂ ရက်နေ့အထိ အတော်များပါတယ်။ ပြီးတော့ ၂ ရက်လောက် ခြားပြီး ဆက်လာနေတာ အခု ၂၂ ရက် နေ့အထိ လာနေလို့ပါ။ ရာသီသွေးလည်း များပါတယ်။ ရာသီသွေးပေါ်တဲ့ရက်က ကြာနေတော့ စိတ်ပူလိ့ပါ။ အရင်တုန်းကလည်း တခါမှ မဖြစ်ဘူးတော့ အခုလို အကြာကြီးလာနေတာ တခုခုများ မှားလို့လားလို့ စိုးရိမ်လို့ပါ။ လူကလည်း အားနည်းသလို ဖြစ်ပြီး မူးမူးနေပါတယ်။ အခုလို သားဆက်ခြားတဲ့နည်းသုံးရင် အဲ့လို ဖြစ်တတ်လား သိချင်လို့ပါ။ ရာသီသွေးက ပုံမှန်မပေါ်ဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။ အခုလို အားနည်းပြီး မူးနေတာကို ဆေးသောက်လို့ရလား သိချင်လို့ပါ။
ကိုယ်ဝန် တားနည်းတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ အရေပြားအောက်မှာ ထည့်ထားရတဲ့နည်းကို အမျိုးသမီး အတော်များများ စိတ်ဝင်စားကြတယ်။ သားအိမ်ထဲလိုမျိုး အတွင်းကျကျမှာ လုပ်ရတာ မဟုတ်တော့ ရှက်စိတ် နည်းစေတယ်။ သူများလဲ မြင်တာ မဟုတ်ဘူး။ တနေ့တလုံး ဆေးသောက်ရတာမျိုးလဲ မဟုတ်။ သုံးလတခါ ဆေးထိုးနေဘို့လဲမလို အကြာကြီး ခံတယ်။ အခါတိုင်း အခါတိုင်း သုံးဘို့ (ကွန်ဒွမ်) တွေလဲ ဝယ်နေစရာ မလိုဘူး။ (ကွန်ဒွမ်) သုံးပါ ပြောလို့ အဖေါ်-ခင်ပွန်းက ငြင်းနေမှာလဲ မပူရဘူး။
Implants ဆိုတာ အရေပြားအောက်မှာ ထည့်ထားရတဲ့ အချောင်းလေးပါ။ ဆံညှပ်အရွယ်၊ ကွေးနိုင်ဆန့်နိုင်တဲ့ ပြွန်ချောင်းကလေးတခု ဖြစ်တယ်။ လက်မောင်းအတွင်းဖက် အရေပြားအောက်မှာ ထုံဆေး-ပိုးသန့်ဆေးသုံးပြီး ထည့်ထားရတယ်။ သူကနေ Progestogen ဟော်မုန်းကို ၃ နှစ်ကြာအောင် ထုတ်ပေးနေမယ်။ လစဉ် မ-မျိုးဥအိမ်ကနေ မ-မျိုးဥမထွက်စေအောင် တားဆီးပေးတယ်။ သားအိမ်အဝရှိတဲ့ ချွဲကျိတဲ့ အရည်ကိုလဲ ပြစ်စေးလာစေလို့ ကျားသုက်ပိုးကို သားအိမ်ထဲ မဝင်စေအောင် ထားမယ်။ သားအိမ် အတွင်းသား နံရံကိုလဲ ပါးလွှာစေလို့ သန္ခေတွယ်ကပ်မှာကိုလည်း တားဆီးပေးမယ်။
၉၉% မက ထိရောက်တယ်။ လစဉ်ရာသီလာအပြီး ၅ ရက်မြောက်နေ့က စထည့်ထားရင် ချက်ချင်းထိရောက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိမနေစရေဘူး။ ကလေးဖွါးပြီးစမှာလဲ ထည့်နိုင်တယ်။ သားပျက်ပြီးစလဲထည့်နိုင်တယ်။ ကလေးနို့တိုက်တာကိုလဲ သက်ရောက်မှုမပြု။ လစဉ် ရာသီမလာမီ လက္ခဏာတွေကိုလဲ သက်သာစေတယ်။
ဘာဘဲလုပ်လုပ် သတိကြီးစရာတွေတော့ ရှိပါတယ်။ မတော်တာ၊ မထင်တာ ဖြစ်လာတတ်တယ်။ ရာသီ မမှန်တာ၊ ထည့်ထားတဲ့နေရာ ပိုးဝင်တာ၊ နာကျင်တာ၊ ထည့်ပေးတာက နေရာမကျတာ၊ ထည့်ထားတဲ့ ပစ္စည်းက ဟိုရောက် ဒီရောက်သွားတာ စသဖြင့်။ ၁၉၉ဝ ကျော်မှာ စပေါ်တုံးက အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ကိုယ်ဝန်တားနည်းဖြစ်လာရာကနေ ၂ဝ၁၁ အစပိုင်းရောက်တော့ ကိုယ်ဝန် ရသွားသူပေါင်း ၆ဝဝ ရှိတယ်လို့ ဗြိတိန် တီဗွီတွေမှာ ပြောလာတယ်။ မကြာခင်မှာဘဲ အဲလိုပြောတာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း မီဒီယာက နားလည်မှုလွဲတာပါလို့ (ဂါးဒီးယန်း) သတင်းစာကနေ ပြန်ရေးတယ်။ ၁ဝ နှစ်အတွင် ကိုယ်ဝန်ရသူပေါင်း ၅၄၈ ယောက်ရှိတယ် ဆိုတာဟာ မအောင်မြင်မှုနှုန်း တနှစ်မှာ ဝ့ဝ၁၄% သာဖြစ်တယ်။ အောင်မြင်မှုနှုန်းက ၉၉့၉၈% ဖြစ်တယ်။
1. Nexplanon ဆိုတာ Organon ကုမ္ပဏီကထုတ်ပြီး Etonogestrel ပါတယ်။ ၃ နှစ်ခံတယ်။
2. Norplant ကနောက်မှပေါ်လာတာ။ ၁၉၈၃ ကတည်းက ဖင်လန်နိုင်ငံမှာ စသုံးခဲ့တယ်။ Levonorgestrel (Progestin) 36 mg ပါပြီး (2.4 mm × 34 mm) အရွယ်ရှိတဲ့ Silicone capsules (၆) ခု ဖြစ်တယ်။ ၅ နှစ် ခံတယ်။ ယပ်တောင် ပုံလေးလို လှလှပပလေး ထည့်ပေးတယ်။ အပေါ်ကနေ မြင်နေရတတ်တယ်။ သေခြာစမ်းရင် သိနိုင်တယ်။ အိန္ဒိယကထုတ်တဲ့ Norplant capsules ၆ တောင့်ထဲမှာ Aprogestin ပါတယ်။ ဝတဲ့သူတွေလဲ ရတယ်လို့ ပြောတယ်။ ၅ နှစ်ထားနိုင်တယ်။
3. Jadelle (Norplant II) နာမည်နဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ရှိတယ်။ (2.5 mm × 43 mm) အရွယ် (စီလီကွန်) (၂) ချောင်းထဲမှာ 75 mg Levonorgestrel ပါတယ်။ ၁၉၉၆ က စသုံးတယ်။ အစက ၃ နှစ် နောက်တော့ ၅ နှစ် အာမခံတယ်။ အစနှစ်မှာ တနေ့ကို 100 µg/day နောက်၊ 40 µg/day နဲ့ 30 µg/day နှုန်းနဲ့ ၅ နှစ်ကြာ ထုတ်ပေးနေမယ်။ လက်မောင်း အတွင်းဖက်၊ အရေပြားအောက်မှာ (ဗွီ) ပုံသဏ္ဌာန် ထည့်ပေးမယ်။ ထည့်နည်းကို http://www.rxlist.com/jadelle-drug.htm မှာ အတိအကျ ပြပေးထားတယ်။
4. Implanon (Etonogestrel) ကို ဗြိတိန်မှာ ၁၉၉၉၊ ကတည်းက စသုံးတယ်။4cm x2mm အရွယ်ရှိတယ်။ တတောင်ဆစ် အောက်နား အရေပြားအောက်မှာ ထည့်လေ့ရှိတယ်။ အခု အဲဒါ Nexplanon နဲ့ အစားထိုးလိုက်ပြီ။ ခပ်ဆင်ဆင်ပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ဓါတ်မှန်မှာ ပေါ်နိုင်တာ လုပ်ထားတယ်။ Applicator ပါလို့ ထည့်ရတာလဲ လွယ်တယ်။ အရင်ဟာကို ၃ နှစ် ကျော်ရင်တော့ အသစ်နဲ့ အစားထိုးတာ ကောင်းတယ်။ Implanon ကိုသာ USA မှာ ၂ဝဝ၆ ဇူလိုင်ကစပြီး လိုင်စင်ပေးထားတယ်။ Etonogestrel 68 mg ပါပြီး၊ ၃ နှစ်ခံ၊ (၁) ချောင်းထဲ ဖြစ်တယ်။ ထုံဆေးသုံးပြီး လူနာက ညာသန်ဆိုရင် ဘယ်လက်ဖျံမှာ တဒေါင်ဆဆစ် အထက် လက်မောင်း အတွင်းဘက် ၈-၁ဝ စင်တီမီတာ နေရာမယ် ထည့်ပေးတယ်။ ၅-၁၅ မိနစ်အလုပ်သာ ဖြစ်တယ်။ ၄% လောက်မှာ သွေးခြည်ဥတာ၊ ဖေါင်းတာ၊ နီရဲတာ၊ နာနေတာ ဖြစ်တတ်တယ်။
မထည့်ခင် ကိုယ်ဝန်ရှိမနေတာ သေခြာစေသင့်တယ်။ ဆီးစစ်ပါ။ ရာသီစလာတဲ့ရက်ကနေ ၅ ရက်အတွင်း လုပ်သင့်တယ်။ ကလေး ဖွါးပြီးစ၊ ကလေး ၃ ပါတ်အရမှာ လုပ်နိုင်တယ်။ ကလေးနို့တိုက်တာမှာ ပြဿနာမရှိစေဘူး။ နို့ထဲမှာ ဟော်မုန်း နဲနဲလေးတော့ ပါနေနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်ပြီးသူက ချက်ချင်းထည့်နိုင်တယ်။ ထည့်ပြီး ၂၄ နာရီကစပြီး သက်ရောက်မှု ရှိမယ်။ ပြန်ထုတ်ပြီးရင် မကြာခင် ကိုယ်ဝန် ရနိုင်လာတယ်။
ရေရှည်မှာ ဘာဖြစ်သလဲ။ ကင်ဆာ မဖြစ်တာတော့ သိထားတယ်။ တခြားဆိုတာတွေ သိပ်မသိလှသေးပါ။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး မရှိတော့ မဟုတ်ပါ။ ဟော်မုန်း တန်ခိုးက ကြီးတယ်။ တခုကောင်းတာက တခုခုဖြစ်ရင် ထုတ်ပြစ်လိုက်ယုံဘဲ။ ဆေးထိုးတာသူတွေနဲ့ မတူဘူး။ ဆေးသတ္တိက ချက်ချင်း ရပ်သွားတာ။ မွေးလမ်းကြောင်းကနေ သွေးဆင်းနေချိန်၊ အသဲရောဂါရှိနေရင်၊ သွေးခဲပိတ်ရောဂါရှိနေရင် မသုံးရဘူး။ မျိုးဥအိမ် အကျိတ်ရှိသူတွေလဲ မသုံးသင့်ဘူး။ လူကောင် ဝလွန်းသူတွေအတွက်လဲ ကိုယ်ဝန်တားဘို့ မသေခြာလှဘူး။ ဥပမာ Body mass index ဆိုတာက 35kg/sq metre ကျော်နေရင်။ ကိုယ်ဝန် ရှိနေရင်၊ အသဲရောဂါ ရှိနေရင်၊ အခု ဒါမှမဟုတ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်က ရင်သား-ကင်ဆာရှိရင်၊ (မိုင်ဂရင်း) အမူးရောဂါ ရှိရင် မသုံးသင့်ဘူး။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ = ခေါင်းကိုက်၊ ခေါင်းမူး၊ သွေးနဲနဲစွန်းမယ်၊ ရာသီများမယ်၊ မဆင်းဘဲနေမယ်၊ ကိုယ်အလေးချိန်တိုး၊ ရင်သားနာ၊ စိတ်ကျ၊ စိတ်မူပြောင်း၊ ပျို့ချင်မယ်၊ ရာသီမလာတာ လူတိုင်းတော့ မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ရောင်သလိုဖြစ်မယ်၊ ဝက်ခြံပိုထွက်မယ်၊ လူကပိုဝလာ၊ (မဟုတ်ဘူးပြောတာလဲရှိတယ်)၊ စိတ်မူပြောင်းလဲ၊ (မဟုတ်ဘူးပြောတာလဲရှိတယ်)၊ လိင်စိတ် ပြောင်းလဲ၊ (မဟုတ်ဘူးပြောတာလဲရှိတယ်)။
မသုံးသင့်သူတွေ = မွေးလမ်းကနေ ဘာမှန်းမသိဘဲ သွေးဆင်းနေသူ၊ အသဲရောဂါဆိုးရှိနေသူ၊ သွေးခဲပိတ်ရောဂါရှိနေသူ၊ မျိုးဥအိမ်-အကျိတ် ရှိနေသူတွေ၊ St John's wort (Hypericum perforatum, Tipton's Weed, Chase-devil, Klamath weed) ခေါ်တဲ့ စိတ်ကျရောဂါ အတွက် သုံးတဲ့ တိုင်းရင်းဆေး ပေးနေသူတွေ၊ Rifampicin, Rifabutin, Phenytoin, Carbamazepine, Phenobarbital နဲ့ Primidone ဆေးတွေ သောက်နေရသူတွေ HIV ဆေးပေးနေသူတွေမှာ သတိထားရမယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ဝ နှစ်တာ သမိုင်းကို ဆန်းစစ်တဲ့အခါ စိတ်မသက်သာစရာတွေ တွေ့လာရတယ်။ ၆-၁-၂ဝ၁၁ လန်ဒန်က လာတဲ့ သတင်းတပုဒ်မှာ ၃ နှစ်ခံ Implanon implant သုံးတဲ့ အမျိုးသမီး ၅ဝဝ မယ် ကိုယ်ဝန်ရခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။ (တီဗွီ-စတိုရီ) တွေလည်း ပြကြတယ်။ နောက်ထပ် ဒါပေမဲ့တခု ဆက်လာပါတယ် (မီဒီယာ) သမားတွေဟာ အခြေခံသင်္ချာကို နားလည်မှု လွဲနေတယ်တဲ့။ ပြောတဲ့သူက Medical statistician ဆေးပညာ-စာရင်းဇယား ပညာရှင်ပါ။ ၁ဝ နှစ်အတွင်း ကိုယ်ဝန် ၅၈၄ ဆိုတာဟာ Failure rate မအောင်မြင်နှုန်း ဝ့ဝ၁၄% သာဖြစ်ပါတယ်၊ Success rate အောင်ချက်က ၉၉့၉၈၆% ပါတဲ့။
UK မှာ ၁၉၉၉ တည်းက အမျိုးသမီးပေါင်း ၁့၎ သန်း Implanon ထည့်ထားကြတယ်။ ၁၆ဝ၇ က (ကွန်ပလိန့်) တက်တယ်။ ၉၉% ထိရောက်တယ်။ ညွှန်ကြားချက်လဲ ထုတ်ထားလိုက်တယ်။ လူနာတွေကို သတင်းအချက်အလက် အစုံ အသိပေးပါ။ အကျိုးနဲ့ အပြစ်တွေ၊ တခြားနည်းနာတွေ၊ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ ပါစေရမယ်။ ပြဿနာပေါ်ရင် ရှင်းလင်းချက်၊ တောင်းပန်ချက်၊ ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲ၊ ထည့်ပေးထားသူတွေကို (ဖေါလိုအပ်) ခေါ်ယူစစ်ဆေးမှု စီစဉ်ပေးပါ၊ မထည့်ခင်က ကိုယ်ဝန်ဟာ သားအိမ်ထဲ၊ သားအိမ်ပြင်ပမှာ ရှိနေ-မနေ သေခြာစေပါ။